Rapid Premium Account လုပ်ကြရအောင် — MYSTERY ZILLION
Rapid Premium Account လုပ်ကြရအောင်
July 2009 edited January 2011 in Rapidshare Account
Rapid Premium account ကို ဘယ်လိုလုပ်ယူမလဲ။ လွယ်ပါတယ်။
(၁) Paypal Premium Account တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ။
Paypal Pre ဘယ်လိုဆောက်မလဲ?
Freedom လေးသုံးပြီး ဒီ Link လေးကို၀င်ပါ။
Select Country မှာ တော့ အဆင်ပြေမဲ့ဟာ တစ်ခုခု ရွေးလိုက်ပါ။
ဥပမာ - S'pore မှာ သူငယ်ချင်းရှိရင် သူလိပ်စာကို ခဏသုံးနိုင်ပါတယ်။ မထိခိုက်ပါဘူုး။
မရှိရင်တော့ google ကနေ S'pore ရဲ့ Address တစ်ခုခုကို ရှာထည့်ပေါ့နော
Postal code တောင်းတာနော် zip code (065) ဆိုတာကိုထည့်လို့မရပါဘူး။
credit card details မေးလာရင် click on CANCEL
(၂) ဒီပေးထားတဲ့ Link တွေထဲက တစ်ခုကို၀င်
Register လုပ်။ Paypal Account နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်။
ကိုယ် Register လုပ်လိုက်တဲ့ site ရဲ့ Instruction ကိုသေချာဖတ်ပါ။ ကိုယ့် Paypal ၀င်ငွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြထားပါတယ်။
(၃) Ok အနည်းဆုံး 15 $ လောက်ရရင် Rapid Pre Account လုပ်လို့ရပါဘီ။
Online Account တစ်ခုလဲ ရဘီလေ။ Paypal ရှိနေဘီဆိုရင် Rapid မှမဟုတ်ဘူး Online မှာ ဂျလေဘီလုပ်လို့ရဘီလေ။ ကဲစမ်းကြည့်ကြဦးဗျာ။ စမ်းပီးလို့မရရင် ပြောပါ။ မစမ်းဘဲနဲ့တော့ မမေးစေချင်ဘူး။
ဒီ Account တွေကို စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစမ်းကြည်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တော့ မစမ်းရသေး၀ူး။ ကျနော် account လေးဂိသွားမှာစိုးလို့
L=RS Login ID For Premium Account
P=RS Password For Premium Account
Rapid ကို ဟပ်ကြမလား။ ရ မရ တော့မသိဘူးနော
မှာ Register လုပ်လိုက်ပါ ။ အဲဒီမှာ Survey တွေဖြေပြီး Paypal ၀င်ငွေရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုဖြေရတာလဲဗျ .. register တော့လုပ်ပြီးသွားပါပြီ .. ဘာတွေ ဖြေရမှန်းမသိလို့ပါ :O
Account Login ၀င်ပီး http://www.awsurveys.com/S0.cfm ကိုသွား။ဒါမှမဟုတ် Home ကိုသွားပါ။
ကျနော် paypal ထဲကို income ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့။ Nano ပြောတဲ့ Link လေးပါ
ဒီနေရာလေးကသွားပါ။ အန္တရယ်မရှိကြောင်းအာမခံပါတယ်။ ရီဂျစ်စတာလုပ်ဖို့က Create A Free Account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်။ ပီးတော့ home page ကိုသွားပါ။ အောက်နားလေးမှာ The Following Surveys are Available: ဆိုတာတွေ့ရမယ်။ အဲဒီ့အောက်မှာ လင့်ခ်လေးတွေ5ခုလားမသိဘူးရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီ့ လင့်လေးတွေကိုနှိပ်ရင် Please writeashort review (about3sentences) for the2online Websites Below. Click on the link below andawebsite will pop-up, Please Evaluate it and fill in the boxes below. နဲ့
Short Evaluation - Please evaluate and give your general impressions of the above website. ဆိုပီး Fill box လေးတွေ့ရမယ်။
အဲဒီ့ website 1 &2ကိုနှိပ်ပီး ပေါ်လာတဲ့ site ကို ဆာဗေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ တစ်ခုခု မှတ်ချက်ရေးပေး။
Fill Box နှစ်ခုလုံးမှာ ဖြည့်ရမှာနော်။
ပီးရင် click here to submit ....ဆိုတဲ့ Button လေးကိုနှိပ်။
Thank you 1233544, Your account has been credited $4.00 for completing this survey.
ဆိုတာလေးတွေရရင် ခင်ဗျားမှာ ယူအက်စ် ဒေါ်လာ4ဒေါ်လာတောင် ၀င်ငွေရှိသွားဘီပေါ့။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့တစ်တွေ online မှာ ၀င်ငွေရှိဘီပေါ့ဗျာ။
အဲဒီ့ page မှာ ၀င်ငွေဘယ်လောက်ရနေဘီဆိုတာကို Table လေးနဲ့ရှင်းထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Don't forget to Refer your Friends and earn $1.25 per friend!တဲ့ အဲဒီ့ လင့်ခ်လေးနှိပ်လိုက်ရင် link တစ်ချက်နဲ့ ၀င်ငွေ 1.25 $ ရမည့် Link (ဥပမာ - http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=princeakarit) လေးပေးလိမ့်မယ်ဗျ။ အဲဒါလေးကို gtalk မှာ copy/paste လုပ် gtalk က ဘော်ဘော်တွေ ချက်ရွန်းက ဘော်ဘော်တွေကို နှိပ်ခိုင်းပေါ့။ အဲဒီ့လိုနဲ့ income က 75 ရဘီဆိုရင် paypal ကို Transfer လုပ်လို့ရဘီ။ paypal မှာရဘီဆိုရင် ကြိုက်တာ၀ယ်တော့ online ကနေ။ ကဲ လွယ်သလား ခက်သလားရာမ။ ကျေးဇူးတင်ရင် ဒီလင့်လေးနှိပ်နော်။ ကျနော်ပထမဦးဆုံး Link နှိပ်ဖို့ အကူအညီတောင်းလိုက်တာ ကိုရသာ၊ ကိုစိုင်း၊ ကိုဘလက် နဲ့ သီရိ တို့ကိုဘဲ။
မမေ့နဲ့နော် ဒီလင့်ခ်လေးကိုနှိပ်ဖို့။ account တော့ဆောက်နော်။
*ငါ bot များဖြစ်နေမလား *
ဆြာကီး အဲဒါ rscrack မှာပါတဲ့ password list လေ အဲဒါကိုသွားသုံးလို့က RS က ဆြာကီးကို ခေါင်းပါခေါက်သွားလိမ့်မယ်:P
ဒါမျိုးရှာပြီး information share တဲ့ Princeakarit ကိုလည်းကျေးဇူးတင်သင့်တယ်။ ငါရှာတွေ့တာ ဥထားလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတဲ့ စိတ်ကိုချီးကျူးပါတယ်။
Online ပေါ်က Survey 90% လောက်က Scam တွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ Survey တွေကရော Scam မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါရဲ့လား ? AWsurveys.com ဆိုပြီး Google ကြည့်တာတော့ Scam လို့ပြောတဲ့လူကများပါတယ်။ Pay out ရဖူးတဲ့လူရှိပြီလား ? ရရင်တော့ MM ကလူတွေအတွက် ဝမ်းသာစရာပါ။ Paypal blacklisted နိုင်ငံအတွက် paypal ဖွင့်ဖို့လွယ်လွယ်ကူကူ နည်းလမ်းရတာပဲ။
တကယ်ရမရလေးလည်း အကြောင်းပြန်ပေးစေချင်ပါတယ် Princeakarit ရေ။ MZ ညီနောင်တွေအတွတ် Mislead ဖြစ်စေမယ့် သတင်းမှားမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ :67::67:
ကိုကြီးပရင့်..ဇူးဇူး..လုပ်တာ..၆ ကျပ်တောင်ရတယ်ဂျ..တိလား..စစ ချင်းမှာလေ..
အဲဒီ လေး က..အောက်မှာပေးထားတယ်...၆ ကျပ်နဲ ့စချင်ရင်..စလို ့ရတယ်ဆိုလို ့လုပ်လိုက်တာ..
အယ် ကျနော်က ဥတတ်ဖူးဗျ။ ဥလည်း ဥဖူးဘူးနော်။ :d
ပိုက်ဆံပြည့်ပြီလားအစ်ကို ထုတ်လို့ရရင် ပို့စ်တင်လိုက်ဦးနော် Good luck!
မသင်္ကာလို့ နောက်တစ်ခုစမ်းနေတယ်ဗျ။ :d
ကျနော့်ရဲ့ လင့််လေးလဲ နှိပ်ပေးကြပါဦး။ ဘယ်လိုဆက်ပြီးအသုံးချရမယ်ဆိုတာလည်းပြောပေးပါဦး။
ပြောလို့သာလုပ်လိုက်တယ်။ 14$ ရနေတယ်ဗျာ။ ဘာဆက်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီပိုက်ဆံကို အွန်လိုင်း အကောင့် တွေဘာတွေ၀ယ်လို့ရမလားဗျ။:D:D ပိန်းလွန်းလို့ ကိုယ်ကိုကိုယ်တောင် စိတ်ညစ်လာပြီ:((:((
75$ ပြည့်ရင် pay pal အကောင့်နဲ့ ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲခင်ဗျ။
6 ကျပ်က မတတ်ဖူး..အဟင် ့..ကူညီကြပါအုံး..အဟင်
hackforums တို့လို နိုင်ငံတကာဖိုရမ်များရယ်.. google ရယ်အားကိုး ပြီး တညတာလေ့လာလိုက်တော့ 99 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သော သူများက scam လို့ပြောကြတယ်ဗျနော်..
တစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ screenshot တွေနဲ့တကယ်ရကြောင်းပြောတာတွေ့ရပါတယ်.. :39:
ကျွှန်တော်ကတော့ မထင် :5: :P
ကျန်ခဲ့လို့ hack awsurveys လို့ google မှာရှာကြည့်ပါဦး :P သူ့ကိုဟက်ရတာလွယ်မှလွယ်.. 75 ကျပ်ရှိစရာမလိုဘူး.. ပြည့်အောင် ဟက်လို့ရတယ်.. ဒါပေမယ့် 75 ကျပ်ပြည့်လည်းသူကပိုက်ပိုက်ပေးတာမှမဟုတ်တာ :D:D ဒါနဲ့တကယ်ရရင်လည်းပြောပြကြဦးနော်... ကျွှန်တော်တော့မစမ်းတော့ဘူး :P
ခင်ဗျားတို့ပေးထားတဲ့လင့်ကို သူများတွေနှိပ်ရုံနဲ့တော့ ပိုက်ပိုက်ရ၀ူးဗျ။
နှိပ်ပြီး register ဆက်လုပ်လို့အောင်မြင်မှ ကိုယ်က ပိုက်ဆံရတာ။
ကျွန်တော်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် proxy change ပြီး ကိုယ့်ဘာသာပဲနှိပ်၊ ပြီးရင် အီးမေးအကောင့်သစ်နဲ့ register ပြန်လုပ်ပေးတာ ရတယ်ဗျ။ ကျပ်30 လောက်တော့ရနေပြီ။ 75 ပြည့်မှ paypal ကို တကယ်လွှဲပေးမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။
minimun $75 ထိ ရှိဖို့မလိုပဲ နည်းနည်းနဲ့လွှဲလို့ရတဲ့ Survey ဆိုဒ်တွေတော့ရှိတယ်။ ဥပမာ neobux. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မှတ်ပုံတင်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ တခြား အဆင်ပြေမယ့် survey site တွေရှိရင် ရှယ်ကြပါအုံး။
$75.75 ပြည့်လို့ Redeem Money လုပ်လိုက်တာ5ရက်စောင့်ပါဦးတဲ့ .. ပြောတာပဲဗျာ။ အဲ့ဒီမှာကြည့်ဦး။
$75.75 ပြည့်လို့ Redeem Money လုပ်လိုက်တာ5ရက်စောင့်ပါဦးတဲ့ .. ပြောတာပဲဗျာ။
PS:သိပ်တော့မျှော်လင့်မထားနဲ့နော်။ သူတို့က ပုံပြင်တွေ သိပ်ပြောတတ်တာ။
:dအဟီး.....နောက်(၅)ရက် ပြည့်ရင်ပြောပြဦးဗျာ။ ခင်ဗျားအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ဆက်လုပ်တော့မယ်။ (မပိုင်ဘူးလား:d)
Sniper wrote: »
တကယ်လို့များ အဲ့ဒီရက်မှာ အကောင့်အသစ်လက်မခံတော့ရင်ကော... ဟီး... ဟီး.. :D:Dကိုယ့်ဖက်က ကိုယ်တွေးနေတာ အပိုင်ပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ လုပ်ပြီးနေပြီပဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ငါးရက်ပြည့်ရင်တော့ ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောပါ့မယ်။ စိတ်ချပါ။
တကယ်လို့များ အဲ့ဒီရက်မှာ အကောင့်အသစ်လက်မခံတော့ရင်ကော... ဟီး... ဟီး.. :d:d:dကိုယ့်ဖက်က ကိုယ်တွေးနေတာ အပိုင်ပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ လုပ်ပြီးနေပြီပဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ငါးရက်ပြည့်ရင်တော့ ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောပါ့မယ်။ စိတ်ချပါ။
မိုက်တယ်။ ကွန်ကရစ်ကျူလေးရှင်းပါ :d ။
Paypal account ကလုပ်ထားတာကြာပါဘီ။ ဒါပေမယ့် credit card or debit card နဲ့ချိတ်ပါ ပြောနေလို့။ အဲဒါတွေ နဲ့မချိတ်ပဲ paypal acc: ကို သုံးလို့ရလားမသိဘူး။ ရတယ်ဆိုရင် လူပိန်းနားလည်အောင် ဘယ်လို လုပ်လဲ ရှင်းပြပေးပါလား။ Paypal ဆိုတာ ကြီးကို အရမ်းသုံးချင်နေတာ ကြာပါဘီ။
ဒီpost ရဲ့ အစမှာ ပါဘာတယ်ဗျ။:106:
ကျွန်တော် ဆိုလိုတာ က ကျွန်တော့ paypal ကို card တွေနဲ့ ချိတ်မထားဘူး။ အဲဒီ paypal account ထဲကို အစ်ကို ပေးထားတဲ့ link တွေက သူတို့ instruction အတိုင်းလုပ်ရင် ငွေတစ်ကယ် ထည့်ပေးလားဆိုတာ သိချင်တာပါ။ Paypal က card တွေနဲ့ မချိတ်မချင်း အကောင့်သာရှိပြီး ငွေအထည့်အထုတ် လုပ်မရဘူး လို့သိထားလို့ပါ။ ရတယ် ဆိုရင်တော့ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော် လောက်က စမ်းကြည့်တာ အဆင်မပြေလို့ပါ။:D
နာတို့ဆီမှာလို တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံ မဟုတ်သေးလို့ ဘဏ်မှာတန်းဆီပြီးငွေထုတ်နေရလို့ဖြစ်မှာပေါ့။
I. WHAT IS AWSURVEYS ?
One of the websites that pay members to give just because surveys are awsurveys.com and the evidence is not so much in doubt again.
Only with the register and then giveasurvey on our website will be provided directly to get $ 1-6 even have the opportunity to geta$ 500 prize each month for the successful.
But we can not fudge especially due to violation of T.O.S. will soon be discovered by the awsurveys.
Each member may only register one account can not be more, as if more will be discovered immediately, for the record awsurveys IP address (Internet Protocol), if there is then the same is certainly considered to be in violation of T.O.S. and will never earn from awsurvey. There is more to each new member who signed up also required to give when the survey will not be considered in violation of T.O.S. too. For more details about T.O.S. as below:
Created 50 USD in 1 day
Becomeavalued member of RichPtc and start enrichening your wallet today with $1 clicks and $10 Singups!
အဲဒီကြော်ငြာကို တစ်ခြား Forum မှာတွေ့လို့ MZ သူငယ်ချင်းများကို Share လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် . . . Register လုပ်ပြီး Paypal အတွက် ငွေရှာကြတာပေါ့ . . .
အင်း ...... ဒီပို့စ်ကို www.thungechinmyar.co.cc မှာလည်း ရေးဦးမယ်။
awsurveys ဆိုဒ်ဟာ scam ဆိုဒ်သာဖြစ်ပါကြောင်း ....
www.scam.com မှာ ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အလိမ်ခံရပြီးပါပြီ ... (:((:((
ဒီပိုစ့်ကို နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့နေရသလိုဘဲ။ :d
bux.to က Scam ဆိုဒ်လား ခင်ဗျ သိတဲ့အစ်ကိုများရှိရင် ပြောပြပေးပါ။
ရပါတယ်။ credit card ချိတ်ပါလို့ပြောလာရင် အဲဒီ စာမျက်နှာကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် login ပြန်ဝင်ပါ။ credit card နဲ့ မချိတ်ဘူးဆိုရင် အကန့်အသတ်များရှိပါတယ်။ တစ်လကို paypal သို့ ဒေါ်လာ ၄၀၀ မှ ၅၀၀ ထိသွင်းနိုင်ပြီး တစ်လကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပြန်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
paypal ဝင်ငွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာ ဒီမှာ ရှုနိုင်ပါတယ်
အဲဒီ့လိုနဲ့ income က 75 ရဘီဆိုရင် paypal ကို Transfer လုပ်လို့ရဘီ။ paypal မှာရဘီဆိုရင် ကြိုက်တာ၀ယ်တော့ online ကနေ။ ကဲ လွယ်သလား ခက်သလားရာမ။
ကျွန်တော်မှာတော့ $75 ရလို့ paypal ထဲလွဲလိုက်တာဟီး
ဟီးရောက်ရင် အကူညီပေးတဲ့သူကို rapidshare အကောင့်လေးပေးမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်
paypal accoun မှာက လည်း$0.00 ဆိုပဲဟီး
rapid premium account ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါတယ် ခက်တာက ညီတို ့ကိုဖြည့်ခိုင်းတဲ့အရာတွေတော်တော်များများကိုနားမလည်ဘူးခင်ဗျာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဆင့်ချင်ရှင်းပြစေလို ့ပါတယ် နလပိန်းတုန်းရှင်းနည်းလေးနဲ ့ပေါ့ နော်
ညီကဒုံးေ၀းလို ့ပါ ညီအပြင် ဒုံးေ၀းတဲ့လူတွေလဲ နာလည်းတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ
online မှာ ဒီလောက်လွယ်လွယ်နဲ့ များများစားစား ပိုက်ပိုက် ရှာလို့ရရိုး လား ။ ကိုယ့်ထက်လည်လို့ သူတို့ ဖန်နေတာ ။ ပိုက်ပိုက်ရှာလို့မရဘူး မဟုတ်ဘူး ။ ရှာလို့ရတယ ်။ ဒီလောက်မလွယ်ဘူး
ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့့လားဗျာ။ ခင်များဟာကလည်း။ အဲဒီအတိုင်းဆိုရင်လူတွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ထိုင်ကလစ်နေတော့မှာပေါ့။
အရင် က RS အကောင့်တွေကို
မှာ သွားသွားယူတယ်..အခုတော ့မ ရတော ့ဘူး.. သူတို့ပေးလဲ သုံးလို ့မရဘူးဗျ.
အဲတော့လည်ပါတယ် .. မြန်မာဖိုရမ် တွေ မှာ သွားသွားအော်တယ်လေ.. တားကို တူညီကျပါအုံး ပေါ့..
ဟီးး အခုတော ့လုပ်တော ့ဘူး..အရင် က လုပ်တာ ပြောတာနော်
ကျွန်တော်မှာ $100 ပြည့်သွားလို့ $ 75 paypal ဆီလွဲလိုက်တာဘာမမရောက်လာဘူးဗျာ
ကျေးဇူး ကမ္ဘာတစ်ရာ တင်တယ်ဗျာ.......
တစ်ချီတည်း 27 $ တောင်ခိုင်သွားပြီ.....
3 ရက်ဆိုင်ရင်.......ငှဲ ငှဲ ငှဲ
paypal account တော့ ဆောက်ပြီပြီဗျ။ဒါပေမယ့် log in ၀င်၇င် error ဆိုပြီးပြနေတယ်။ကူညီပေးပါဦး။:106:
paypal အကောင်.လုပ်ပြီးရင် တန်း၀င်လို.မရသေးပါဘူး။
paypal ကနေ အီမေးနှစ်စောင် ပို.ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးပို.တဲ. တစ်စောင်က နေ confrim လုပ်ပြီး အရင်၀င်ပါဦး။ အဲဒီမှာ သူက ဒုတိယတစ်စောင်ပို.ပြီဆိုရင် login စ၀င်လို.ရပါပြီ ခင်ဗျာ။
ip address က ရှိပြီးသားလို ့ပြောနေတယ်ခင်ဗျာ..............:2:
email account ကို လုပ်တာ မှားနေတယ်လို ့ဘဲပြောနေတယ်ခင်ဗျ...........
Activate လုပ်ဖို့ Password ရေးပြီး Confirm လုပ်လိုက်ရင်
Error 3028. You have accessed your account fromasanctioned country. In accordance with international sanctions regulations, you are not authorised to access the PayPal system. For more information about your PayPal account status, contact [email protected].
အခုမရတော့ဘူးလား......?ကျွန်တော်site ခေါ်လိုက်တာနဲ့...fatal failure ဆိုပြီးပဲပြနေတယ်.....အကိုရေ..:frown: